Ungazifumana njani iiFayile ezisusiweyo okanye iiFolders kwiWindows 8.1
Ngu-Peter Weverka, UMark Justice Justice Hinton
Ngokwesiqhelo, xa ucima ifayile okanye ifolda, iWindows 8.1 ihambisa into kwiRycle Bin. Izinto zihlala kwi-Recycle Bin ngokungenammiselo, zikuvumela ukuba ubuyisele into oyicime kudala emva kokuba wenze njalo.
KwiFayile Explorer, khetha i-Desktop phantsi kweZintandokazi. Ukuvula i-Recycle Bin, cofa kabini okanye ucofe kabini i-Recycle Bin kwindawo yomxholo.
Ungayivula i-Recycle Bin nayo ngokunqakraza kabini okanye ngokucofa kabini kwi icon yayo kwi-desktop uqobo.
Ukuba iifayile ezininzi okanye iifolda zidweliswe kwi-Recycle Bin window, chwetheza igama lento oyifunayo kwibhokisi yokukhangela kwikona ephezulu ngasekunene kwefestile.
Ukuba naziphi na iifayile ziyahambelana noko uchwethezayo, ziya kubonakala kwindawo yomxholo.
Kwiskrini sokuchukumisa, ikhibhodi ebonakalayo ayiveli kwidesktop de ukhethe i icon yebhodi yezitshixo kwicala lasekunene lebar yomsebenzi.
Ukubuyisela ifayile okanye ifolda kwindawo yayo yoqobo, khetha ifayile okanye ifolda kwi-Recycle Bin window.
Kwi Ukulawula isithuba, khetha Buyisela izinto ezikhethiweyo.
Ifayile okanye ifolda ekhethiweyo ibuyela kwifolda eyayikuyo ngaphambi kokuba icinywe.
Ukuba iWindows 8.1 ifuna indawo yediski, iya kucoca ngokuzenzekelayo ezona fayile zindala kwiReycle Bin kuqala. Ukuba ufuna ukulahla yonke into kwi-Recycle Bin, khetha ukuLawula ithebhu uze ukhethe u-Empty Recycle Bin. Emva kokukhupha i-Recycle Bin, awunako ukuhlehlisa isenzo sakho.
Sukukhetha Buyisela Zonke Izinto iqhosha kuba ibeka yonke into enye kwiRekhnoloji yeBin kwakhona kwindawo yayo yoqobo. Uninzi lweefayile ezikwi-Recycle Bin mhlawumbi ziifayile obufuna ukuzicima. Ukukhetha lo myalelo kuya kufana nokulahla inkunkuma kwigumbi lakho lokuhlala ukuze ufumane ipeni oyilahlileyo.
kwiikholamu kwitheyibhile yamaxesha
ipilisi emhlophe yakho engama-54
ukhula luhlala ixesha elingakanani kwinkqubo
Ngaba i-lyrica ibangela ukuqhina